(2) - BookCubicle
Author : AnnaLynn
Anna : Here is the coffee chapter (1/5). Thanks for the delicious Coffee Nyolae ^^. PM me or comment if you made transaction. Or else I won't know nya~ Enjoy the chap fellas~~~
အပိုင်း - ၂ : ကံဆိုးသူမောင်ရှင်လေး။
အတန်းကအမြဲတမ်းဆူညံနေတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ယွန်းချီက ဆူညံတာကိုမကြိုက်ဘူး။ သူက တိတ်တိတ်ဆိတ်နဲ့ပဲ အိမ်မှာ ပွန်းချိနဲ့ကစားချင်တာ။ ပွန်းချိဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အိမ်က ခွေးလေးပါ။ ကျောင်းတက်ရတာက ယွန်းချီအတွက်စိတ်ဆင်းရဲဆုံးအချိန်တွေပဲ။ ကောင်လေးတွေက တအားဆူညံတယ်။ ကောင်လေးတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး ကောင်မလေးတွေကလည်း တအားဆူညံတာပါပဲ။ သူတို့က အားနေကောင်လေးတွေအကြောင်းပဲ ပြောနေကြတာ။ ဆယ်ကျော်သက်တွေမို့ စိတ်ကစားတာတော့ သူ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က စာပိုကြိုးစားသင့်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။
ယွန်းချီ အတန်းထဲမှာ အကြောက်ဆုံးကတော့ ခန့်ဝေသော်ပါပဲ။ ဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုရင်တော့ ယွန်းချီရဲ့ အဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ခန့်ဝေသော်က လမ်းသူရဲတစ်ယောက်နဲ့တူတယ်။ ဟုတ်တာပေါ့ ယွန်းချီအတွက်တော့ ခန့််ဝေသော်က လမ်းသူရဲတစ်ယောက်နဲ့ တကယ်တူတယ်။ သူ့ဆံပင်တွေက နီနီထောင်ထောင်တွေ။ နားမှာလည်းနားပေါက်တွေနဲ့။ တစ်ခါခါမှာ ဘောင်းဘီအမည်းအပွပေါ်မှာ ချိန်းကြိုးတွေကိုတောင် တပ်ထားတပ်သေးတယ်။ အရိုးခေါင်းပုံကျောပိုးအိတ်ကြီးနဲ့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ ပုံက ယွန်းချီမျက်လုံးထဲမှာတော့ chuuninbyou ဖြစ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်အတိုင်းပါပဲ။ ဘာအရိုးခေါင်းပုံကြီးလဲ ဒိတ်အောက်လိုက်တာ။
(Anna : Chuuninbyo ဆိုတာက ဂျပန် slang တစ်ခုပါ။ အသက် ၁၃ - ၁၄ နှစ်အရွယ်လေးတွေရဲ့ ရှက်စရာကောင်းတဲ့အပြုအမူတချို့ကိုစိတ်လိုတာပါ။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အပြုအမူပေါ့။ သူက နဂါးတိုင်းပြည်ကလာတယ်။ သူက မင်းသားလေးတစ်ပါး၊ မင်းသမီးလေးတစ်ပါး အစရှိသဖြင့် စိတ်ကူးယဉ်ပြီးပြုမူနေထိုင်တတ်တဲ့သူတွေကို ခေါ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ "Eighth- Grader Syndrome" လို့ခေါ်ပါတယ်)
နောက်ပြီးယွန်းချီမှာ လျှို့ဝှက်ချက်အကြီးကြီးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့...
"ယွန်းချီ! ဒီမှာကြည့် ဒီမှာကြည့် ဒီကောင်မလေးက မလှပါဘူး ဟုတ်တယ်မလား..."
အတန်းအရှေ့ဆုံးတန်းမှာထိုင်တဲ့သူအများစုက မိန်းကလေးတွေပါပဲ။ ယောကျာ်းလေးတွေဆိုရင်တော့ သူ့လို စာဂျပိုးလေးတွေပဲရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မိန်းကလေးတွေက ယွန်းချီကိုခင်ကြတယ်။ သူတို့ပြောကြတာတော့ ယွန်းချီက သူတို့လိုပဲ အေးအေးလေးမို့လို့တဲ့။ ယွန်းချီလည်း ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောရမှန်းကို နားမလည်ပါဘူး။ သူကယောကျာ်းလေး ဒါပေမဲ့ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်လိုလည်း မဟုတ်ဘူး။ သူ့အဆစ်အပေါက်က မိန်းကလေးတွေနဲ့တူတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရသေးတယ်။
"ကြည့်ကြည့်ပါဦး သူတို့ကသာ အတင်းရူးသွပ်နေတာ မိတ်ကပ်တွေနဲ့ဟာကို..."
ယွန်းချီကို အတင်းလာတုတ်တဲ့ကောင်မလေးက ကုတ်ထောက်ဆံပင်လေးကို နားကြားထဲသွင်းပြီး ဆိုးဆေးကူထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းရဲရဲလေးကို စူပြီးပြောလာလေရဲ့။ ယွန်းချီတစ်ချက်မျက်ခုံးပင့်တယ်။ ကိုယ်တိုင်က မိတ်ကပ်တွေနဲ့ဟာကိုတခြားသူတစ်ယောက် မိတ်ကပ်လိမ်းထားတာကို အပြစ်ပြောလို့ရရိုးလား။
"အင်းလေ... သူရယ်တာကိုလည်း ကြည့်ပါဦး ဟန်ဆောင်ရယ်နေတာအသိသာကြီးကို..."
နောက်တစ်ယောက်ကပါ မကျေမလည်နဲ့လိုက်ပြောလာတယ်။ ယောကျာ်းထုကြီးက သည်းသည်းလှုပ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကို မိန်းကလေးအချင်းချင်းက ဘယ်တော့မှမကြည်ကြဘူး။ အဲကြည်ပြီဆိုရင်လည်း ဒါက တကယ်ကြိုက်လို့ (ဖြစ်နိုင်တာ အများစုကတော့ အလှလေးတွေမြင်တာနဲ့ ဂေးတတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေ)၊ ဒါမှမဟုတ် သက်သက် ယောကျာ်းထုကြီးရဲ့ အတန်းရှင်း(attention) ကိုလိုချင်တာကြောင့်ပဲ။ အခုဒီမိန်းကလေးတွေက စစ်လွန်းတဲ့မိန်းကလေးတွေလို့တောင် ပြောလို့ရမယ်။ သူတို့တွေက အတန်းထဲက ယောကျာ်းလေးတွေ သည်းသည်းလှုပ်တဲ့ ဓာတ်ပုံထဲက မိန်းကလေးကို ကြည်ကြပုံမရဘူး။
"နင့် crush ကောင်က သူ့ကိုသဘောကျနေလို့ နင်မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်လား..."
တစ်ယောက်တစ်ပေါက် စနောက်နေကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေကြားမှာ ယွန်းချီညပ်သလိုလိုဖြစ်လာတယ်။ ဘာလို့ မိန်းကလေးတွေက သူ့ရှေ့မှာဆိုရင် နည်းနည်းလေးမှ အပြောအဆိုမဆင်ခြင်ရတာလဲ။ ညီအစ်မတွေလိုပေါင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကို သူ လက်ခံမပေးချင်ပါဘူး။
ယွန်းချီရဲ့အဖြေစကားကိုမရတာကြောင့် ပထမဆုံးမေးလာတဲ့ ကောင်မလေးက စိတ်မရှည်ချင်တော့စွာနဲ့ ထပ်ပြီးမေးပြန်တယ်။ ယွန်းချီကတော့ ခပ်ဖျော့ဖျော့ပဲပြုံးတယ်။ သူ ဘာပြန်ဖြေရမှာလဲ။ ဓာတ်ပုံထဲက ခွေးလေးက ပွန်းချိဖြစ်ပြီး ဆံပင်အညိုကောက်ကောက်လေးနဲ့မိန်းကလေးက သူပါလို့။ ယွန်း ဆိုတဲ့ ID နဲ့ Photo Model ကောင်မလေးက သူဖြစ်နေတာကြောင့် ဒီကောင်မလေးကို လှလားမလှလားကို သူ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဖြေရမှာလဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှတယ်ဖြေရင် သူက ကိုယ်ရည်သွေးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
ဒါပေမဲ့လည်း အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ယွန်း က လှတယ်။ အာ... ယွန်းချီမျက်နှာရဲချင်သလိုလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဒုက္ခ သူတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှတယ်ထင်နေတဲ့သူဖြစ်တော့မှာပဲ။
ဟုတ်တယ် သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ ယွန်းချီဆိုတဲ့ကောင်လေးသူက အခုအရမ်းကို ကောင်လေးတွေကြားရေပန်းစားနေတဲ့ Photo Model ကောင်မလေး ယွန်း ဆိုတာပါပဲ။
ယွန်းချီ ခပ်တိုးတိုးလေးပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ သူ မမေးမချင်း မရွှေချောတွေက သူ့ကိုအလွတ်ပေးမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ သူ စကားနည်းရန်စဲပဲဖြေလိုက်ရတော့တာပေါ့။
"ယွန်းချီက ဒီကောင်မလေးကို မကြိုက်ဘူးလား..."
ယွန်းချီခေါင်းလေးယမ်းတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သူ ကြိုက်လို့ရမှာလဲ။ သူက ဂရိနတ်ဘုရားဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေထဲက ကိုယ့်ပုံရိပ်ကိုယ်ရေအိုင်ထဲကြည့်ပြီး ချစ်ကျွမ်းဝင်သွားတဲ့ Narcissus မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် သူ ခေါင်းလေးပဲယမ်းမယ်။ ဒါက အကောင်းဆုံးအဖြေပဲ။
မိန်းကလေးတွေက ယောကျာ်းလေးဖြစ်တဲ့ယွန်းချီက ယွန်း ကိုမကြိုက်တာကို တွေ့တော့ သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲက အစိုင်အခဲပြေသွားပြီး တခြား ရောက်တတ်ရာရာပေါက်တတ်ရာရာလျှောက်ပြောကြတယ်။ မိန်းကလေးတွေက အရမ်းတော်တဲ့ သတင်းထောက်တွေလို့ ယွန်းချီထင်တယ်။ ဘာလို့ဆို သူတို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ ကျောင်းအုပ်က ထိပ်ပြောင်နေလို့ ဆံပင်တုကြီးတပ်ထားတဲ့အကြောင်း။ ဆရာမအပျိုကြီးက သူ့ထက်ခုနစ်နှစ်လောက်ငယ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ တွဲနေတဲ့အကြောင်း။ မင်းသားတစ်ယောက်က အရင်တုန်းက စပွန်ဆာရှိဖူးတဲ့အကြောင်း။ BL ရုပ်ရှင်ကားတွေက ဘယ်လိုခေတ်ထ လာတဲ့အကြောင်း။ သူတို့ရဲ့လောကထဲ တာဇံတွေများလာလို့ စိတ်ညစ်တဲ့အကြောင်း။ စုံစိနေတာပါပဲ။
ယွန်းချီက ဒီအကြောင်းတွေ သိပ်မသိပေမဲ့ အတန်းထဲက ကောင်မလေးတွေကျေးဇူးနဲ့ သူ ကောင်းကောင်းသိနေရတယ်။ ရှေ့ဆုံးတန်းထိုင်လို့ ဒီမိန်းကလေးတွေဟာ စာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်လေးတွေက အမှားကြီးမှားတာပါပဲ။ သူတို့က အလယ်တန်းနဲ့နောက်တန်းမှာထိုင်တဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ ဗဟုသုတထက်မပိုရင် မလျော့ပါဘူး။
"ဒါနဲ့ ယွန်းချီ သိပြီးပြီလား နှစ်လည်ကျရင် ငါတို့ Assignment တင်ရမယ်..."
သူတို့ရဲ့ထွေရာလေးပါး အတင်းပေါင်းစုံပြီးတော့ စာအကြောင်းကို ပြန်သတိရသွားပုံရတယ်။
"ငါးယောက်တစ်ဖွဲ့ခွဲတာ... နင် ဘယ်သူနဲ့ကျလဲ ငါပြောပြရမလား..."
အတန်းရဲ့ EC ကောင်မလေးက သူ့မျက်မှန်လေးပင့်ပင့်ပြီးပြောတယ်။ တခြားမိန်းကလေးတွေရဲ့ သူ့ကိုသနားလိုက်တာ ဆိုတဲ့အကြည့်တွေကြောင့် ယွန်းချီစိတ်ထဲ ထိတ်သွားတယ်။ သူက စုပေါင်းလုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဘယ်တော့မှ ကံမကောင်းတတ်ဘူးလေ။
"ဘာလို့ ငါ အဖွဲ့ခွဲပြီးတာကို မသိလိုက်ရတာလဲ..."
"ဟင် နင် အဲ့ဒီကြက်ဖလေးကို လှည့်ကြည့်လိုက်တာက သိနေလို့ မဟုတ်ဘူးလား! ကြေညာတဲ့နေ့က နင်ကျောင်းမတက်ဘူး... ဒါပေမဲ့ ငါက နင်သိပြီးပြီပဲ ထင်နေတာ..."
EC လေးရဲ့ အထိတ်တလန့်ပြောသံကြောင့် ယွန်းချီခေါင်းကိုက်သလိုလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကြက်ဖလေးဆိုတာက ခန့်ဝေသော်ကို မိန်းကလေးတွေခေါ်တဲ့နာမည်ပြောင်ပါ။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ ထောင်ထားတဲ့ဆံပင်နီနီတွေကို အမောက်လို့ သူတို့က ခေါ်ပြီး ခန့်ဝေသော်ကို ကြက်ဖလေးလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ယွန်းချီကတော့ ခန့်ဝေသော်ကို ကြက်မောက်သီးနဲ့ပိုတူတယ်လို့ ထင်တာပဲ။ ကြက်ဖတစ်ကောင်ထက်စာရင် ခန့်ဝေသော်က ယွန်းချီအတွက် ကြက်မောက်သီးနဲ့ ပိုတူတယ်။
ယွန်းချီ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ပြောတယ်။ မေးသာမေးနေရတယ်... သူ့ရဲ့ကံဆိုးမှုကိုလုံးဝယုံကြည်ထားတာကြောင့် သူ ကျိန်းသေပေါက်ဒီကြက်မောက်သီးကောင်နဲ့ တစ်ဖွဲ့တည်းကျမှာပါပဲ။ နောက်ပြီး EC ရဲ့စကားအရဆိုရင် အဖြေက ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသေချာတယ်။ ကျန်တဲ့ ​၁ ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ သူ တမင်အတင်းကြီးကို မကျနိုင်ပါဘူးလို့တွေးထားတာ။ နောက်ပြီး သူ ကြက်မောက်သီးကောင်ကို လှည့်ကြည့်တာက လူမှုကွန်ယက်မှာ ပုံအမှန်ကြီးနဲ့ သူ့ပုံကို အတင်းတွေ love react လုပ်တာကို သိနေလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် မသက်မသာလှည့်ကြည့်တာ။ ကိုယ့်အတန်းဖော်က ကိုယ်ဆိုတာမသိဘဲ အရမ်းတွေ သဘောကျနေတာကို ခံရတော့ ယွန်းချီစိတ်ထဲ အပြစ်ရှိသလိုလိုခံစားရတယ်လေ။ တခြားသူတွေကိုတော့ ယွန်းချီမမှတ်မိပေမဲ့ ခန့်ဝေသော်ကိုတော့ ယွန်းချီမှတ်မိတယ်။ ဒါကလည်း လူဆိုးမျက်နှာပေးနဲ့ လက်နှစ်ချောင်းကို အောက်စိုက်ထောင်ပြထားတဲ့ chuuninbyou pose နဲ့ profile picture ကြောင့်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
"ကျတယ်လေ... နင်ရယ်သူရယ် စာမလုပ်တဲ့အမြွှာနှစ်ကောင်ရယ် တစ်ချိန်လုံးအတန်းမတက်တဲ့တစ်ကောင်ရယ်..."
EC ပြောသမျှသူတွေက သူတို့အတန်းမှာအော့ကြောလန်တွေဖြစ်တာကြောင့် နာမည်တွေမပြောရုံနဲ့တင် ယွန်းချီသိလိုက်ရတယ်။ သေပါပြီ Assignment က သူတစ်ယောက်တည်း လုပ်ရတော့မှာပေါ့။
"Assignment အမှတ်က စာမေးပွဲမှာ တော်တော်ပါမှာမို့ ဆရာတွေက သူတို့ကို နင်နဲ့တွဲပေးတာထင်တယ်..."
Roll2ကောင်မလေးက ဖေးဖေးမမလေးယွန်းချီကိုထပ်ပြောတယ်။
ကုသိုလ်က သူပဲရပါလား! ဘာလို့ သူမှလဲ။ ယွန်းချီစိတ်ထဲမှာ အမုန်းကြီးနဲ့ရေရွတ်နေပေမဲ့လည်း သူ တိတ်တိတ်လေးနေပြီး မချိပြုံးပဲပြုံးနေလိုက်တယ်။ ဘာလို့သူက ကံဆိုးပြီး Assignment ကို တစ်ယောက်တည်း လုပ်ရမှာလဲ။ ဒီကောင်တွေက နည်းနည်းလေးမှ အားကိုးရမဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး။
ငါတော့ ဘုရားကို ညတင်မကဘူး မနက်ပါရှိခိုးသင့်နေပြီ... ယွန်းချီ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့တွေးတယ်။ သူ နေ့တိုင်းဘုရားရှိခိုးနေတာတောင်မှ ကံက ဘာလို့မကောင်းရတာလဲ။ သူ့ရဲ့ group မှာ စာမလုပ်တဲ့သောက်ပျင်းအမြွှာညီနောင်ရယ်၊ ကိုယ်ပျောက်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရယ်၊ နောက်ဆုံး ကျောင်းအုပ်ရဲ့လူရမ်းကား တူလေးရယ်။ သြော်... သူက Assignment လုပ်တာအပြင်... သူတို့ကို ထိန်းပါထိန်းရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့။
ယွန်းချီအတော့်ကို စိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားတယ်။ အတန်းဝင်ပြီးကတည်းက ဌာနမှူးခေါ်လို့ဆိုပြီး ပြန်ထွက်သွားရတဲ့ ဆရာလည်း အတန်းချိန်တစ်ဝက်လောက်မှ ပြန်ရောက်လာတော့တယ်။ သင်ခန်းစာတစ်ခုတောင် မပြီးခင်မှာပဲ အတန်းချိန်က ကုန်သွားခဲ့တယ်။ အတန်းချိန်ကုန်တာနဲ့ ကန်တင်းထွက်မယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ စိတ်ကူးတွေဟာလည်း ဆရာ့ရဲ့အချိန်ခိုးမှုနဲ့ နောက်ဆရာမ ရောက်လာမှုအကြားမှာ ပျောက်သွားရတော့တာပေါ့။
ဘာကြောင့် တခြားသူတွေရဲ့ကျောင်းက လွတ်လပ်ပြီး သူတို့ကျောင်းက ထောင်ကြီးနဲ့တူနေရတာလဲ။ စိတ်မကြည်လင်တော့တာကြောင့် ယွန်းချီတစ်ယောက် အကုန်လုံးကို မကောင်းမြင်ချင်လာတော့တယ်။ သူတို့ဆရာမတွေကလည်း ဘာလို့ အရမ်းတွေကို စာသင်ချင်နေရတာလဲ။
"Paper2က သန်ဘက်ခါ Practical ရှိတယ်နော်..."
အတန်းထဲဝင်လာတာနဲ့ ဆရာမက သူ့ဘာသာရပ်က ဘယ်တော့စာမေးပွဲရှိတယ်ဆိုတာကို အရင်ဆော်သြတယ်။ အခုဆရာမကို ယွန်းချီသဘောမကျတာက အဲ့ဒီအချက်ပဲ။ ဆရာမက အားနေ စာမေးပွဲက ဘယ်တော့ဆိုတာကို အရမ်းပြောတယ်။ နောက်ထပ်ခြောက်လလောက်မှဖြေရမဲ့ နှစ်ဝက်စာမေးပွဲကိုလည်း နှစ်စကတည်းက သတိပေးတယ်။ ဒါက ဘယ်မှာကောင်းလို့လဲ။ စာမေးပွဲဆိုတာက စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ နာမည်မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့သူတို့ နေ့လည်စာစားတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့။ ကောင်လေးတွေက ထုံးစံအတိုင်း လွတ်ကျွတ်ပြီဟေ့ဆိုပြီး ပြေးထွက်သွားကြတယ်။ မိန်းကလေးတွေကတော့ နည်းနည်းလေးအလှပြင်ပြီးမှ ထွက်လာတာပေါ့။ ယွန်းချီကတော့ ကျောင်းရဲ့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ အပင်တွေအောက်မှာ အိမ်ကနေသူကိုယ်တိုင်ပြင်လာတဲ့ ထမင်းဘူးလေးကို ထုတ်လာလိုက်တယ်။
ယွန်းချီရဲ့မိဘတွေက သူနဲ့အတူတူနေပေမဲ့ မိသားစုမျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့အချိန်က ပိတ်ရက်တွေမှာလောက်ပဲရှိတယ်။ ယွန်းချီရဲ့ မိဘတွေက အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အပြင် ရာထူးကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့အိမ်ပြန်ချိန်တွင်က အရမ်းကို နောက်ကျကြတယ်။ များသောအားဖြင့် သူတို့ပြန်ရောက်ရင် ယွန်းချီက အိပ်နေပြီ။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း ယွန်းချီက အခန်းထဲကနေ ထွက်မလာဖြစ်ပါဘူး။ ဘာလို့ဆို သူ စာလုပ်နေတာများတယ်လေ။ သူဧည့်ခန်းထဲထွက်လာတဲ့အချိန်ကျပြန်တော့လည်း သူ့မိဘတွေက ကိုယ့်အခန်းကိုယ်ရောက်နေကြပြီလေ။
ဒီတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ယွန်းချီတို့ မိသားစုက ဘာပြဿနာမှမရှိဘဲ ခပ်စိမ်းစိမ်းဖြစ်နေကြတဲ့ မိသားစုလေးဖြစ်နေတာပေါ့။ ယွန်းချီက လိမ္မာတဲ့သားလေးတစ်ယောက်လို့ ပြောရမယ်။ မိဘတွေက အမြဲတမ်း နောက်ကျမှ ပြန်လာတာကြောင့် သူတို့ကစောစာမထနိုင်ကြဘူး။ ဒါကြောင့် ဟင်းချက်တတ်ကတည်းက ယွန်းချီက မိခင်ကို မီးဖိုချောင်တာဝန်ကို ယူပေးခဲ့တယ်။ ဘာလို့ဆို သူ့အမေလည်း ပင်ပန်းတယ်။ ပြီးတော့ ယွန်းချီကို သိပ်ဂရုမစိုက်နိုင်တဲ့ မိဘနှစ်ပါးလုံးကိုလည်း ယွန်းချီအပြစ်မမြင်ပါဘူး။ သူတို့ငွေရှာတယ်ဆိုတာလည်း သူ့အတွက်ပဲမဟုတ်လား။
အိမ်မှာနည်းနည်းလေးအထီးကျန်တာကြောင့် ယွန်းချီသူ့ညီမဝမ်းကွဲလေး ဟန်နာကို ခေါ်ပြီးအဖော်လုပ်ဖြစ်တယ်။ ဟန်နာက အချုပ်အလုပ်ဝါသနာပါတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ သူမက ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေကို ချုပ်နိုင်တယ်။ ဒါတောင်သူမက အသက်ပြည့်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်မဟုတ်သေးပါဘူး။ ပြောရရင် ပါရမီရှင်လေးပေါ့။ ယွန်းချီက ယွန်းဆိုတဲ့ Photo Model လေးဖြစ်လာတာက ဟန်နာကြောင့်လို့ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါးဆိုလို့ရတယ်။ ယွန်းချီက ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ ဝါသနာပါတယ်။ ဟန်နာက အဝတ်လှလှလေးတွေချုပ်ရတာ ကြိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ နဂိုအဆစ်အပေါက်သေးသွယ်တဲ့ ယွန်းချီတစ်ယောက် မိန်းကလေးလို ဝတ်တာလှမှန်းလည်းသိရော ဟန်နာတစ်ယောက် ခွင်ဖန်တော့တာပေါ့။ ယွန်းချီကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့ကိုယ်သူ လှလှလေးမြင်ရတာသဘောကျတာကြောင့် ဟန်နာ့ရဲ့ ဂါဝန်လှလှလေးတွေကို ဝတ်ပေးဖို့တစ်ခါလေးတောင် မညည်းညူခဲ့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ခြောက်လကျော်မှာတော့ ယွန်းဆိုတဲ့ Photo Model လေးဟာ ယောကျာ်းလေးတွေကြား ရေပန်းစားလာတော့တာပေါ့။ ဒါက ယွန်းချီရဲ့ Photo Model ဖြစ်လာတဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေးပါပဲ။ ယွန်းချီက သူ့ကိုယ်သူ ယောကျာ်းလေးတွေကို သဘောကျလား မိန်းကလေးတွေကို သဘောကျလားဆိုတာတော့ မစဉ်းစားမိဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို သူ လူကြောက်တယ်။ လူအကုန်လုံးကိုကြောက်တာ။ သူနဲ့မရင်းနှီးတဲ့သူ မှန်သမျှကို သူ ညီညီမျှမျှကိုကြောက်တယ်။ ယောကျာ်းလေးသော် မိန်းကလေးသော် သူ မခွဲပါဘူး။ သူ အကုန်လုံးကို ကြောက်ပါတယ်။
"ဟယ် ယွန်းချီ... ကြက်ဖလေးက နင့်ကိုကြည့်နေတယ်..."
ယွန်းချီ ထမင်းဘူးလေးယူနေရင်းကနေ ပြတင်းအပြင်က သူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ ခန့်ဝေသော်နဲ့ အကြည့်ချင်းဆုံသွားခဲ့တယ်။ အဲ သူ့ဆံပင်တွေကမျက်လုံးကို ဖုံးနေတာကြောင့် ခန့်ဝေသော်က သူတို့နှစ်ယောက် အကြည့်ချင်းဆုံသွားတယ်ဆိုတာကိုတောင် သိပါ့မလား ယွန်းချီမသိပါဘူး။ ခန့်ဝေသော်က သူ့ကို တခဏပဲ စိုက်ကြည့်ပြီးတော့ သူ့လူရမ်းကားလေးတွေရဲ့ နောက်ပြောင်ဆွဲခေါ်မှုနောက်က ပါသွားလေရဲ့။
ပြောင်စပ်စပ်ပြောလာတဲ့ သူနဲ့အတူထိုင်တဲ့သူတွေကို ယွန်းချီစိတ်ထဲကနေပဲ မျက်စောင်းထိုးလိုက်တော့တယ်။ သူ့ကိုယ်သူလည်း Assignment အတွက် ကံကောင်းပါစေလို့ပဲ ကြိတ်ဆုတောင်းရတော့တာပေါ့။
အပိုငျး - ၂ : ကံဆိုးသူမောငျရှငျလေး။
အတနျးကအမွဲတမျးဆူညံနတေယျ။ အမှနျအတိုငျးပွောရရငျ ယှနျးခြီက ဆူညံတာကိုမကွိုကျဘူး။ သူက တိတျတိတျဆိတျနဲ့ပဲ အိမျမှာ ပှနျးခြိနဲ့ကစားခငျြတာ။ ပှနျးခြိဆိုတာတခွားတော့မဟုတျပါဘူး။ သူ့အိမျက ခှေးလေးပါ။ ကြောငျးတကျရတာက ယှနျးခြီအတှကျစိတျဆငျးရဲဆုံးအခြိနျတှပေဲ။ ကောငျလေးတှကေ တအားဆူညံတယျ။ ကောငျလေးတှမှေ မဟုတျပါဘူး ကောငျမလေးတှကေလညျး တအားဆူညံတာပါပဲ။ သူတို့က အားနကေောငျလေးတှအေကွောငျးပဲ ပွောနကွေတာ။ ဆယျကြျောသကျတှမေို့ စိတျကစားတာတော့ သူ လကျခံပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့က စာပိုကွိုးစားသငျ့တယျမဟုတျဘူးလား။
ယှနျးခြီ အတနျးထဲမှာ အကွောကျဆုံးကတော့ ခနျ့ဝသေျောပါပဲ။ ဘာလို့ကွောကျတာလဲဆိုရငျတော့ ယှနျးခြီရဲ့ အဖွကေ ရှငျးရှငျးလေးပါ။ ခနျ့ဝသေျောက လမျးသူရဲတဈယောကျနဲ့တူတယျ။ ဟုတျတာပေါ့ ယှနျးခြီအတှကျတော့ ခနျ့ဝသေျောက လမျးသူရဲတဈယောကျနဲ့ တကယျတူတယျ။ သူ့ဆံပငျတှကေ နီနီထောငျထောငျတှေ။ နားမှာလညျးနားပေါကျတှနေဲ့။ တဈခါခါမှာ ဘောငျးဘီအမညျးအပှပျေါမှာ ခြိနျးကွိုးတှကေိုတောငျ တပျထားတပျသေးတယျ။ အရိုးခေါငျးပုံကြောပိုးအိတျကွီးနဲ့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ ပုံက ယှနျးခြီမကျြလုံးထဲမှာတော့ chuuninbyou ဖွဈနတေဲ့သူတဈယောကျအတိုငျးပါပဲ။ ဘာအရိုးခေါငျးပုံကွီးလဲ ဒိတျအောကျလိုကျတာ။
(Anna : Chuuninbyo ဆိုတာက ဂပြနျ slang တဈခုပါ။ အသကျ ၁၃ - ၁၄ နှဈအရှယျလေးတှရေဲ့ ရှကျစရာကောငျးတဲ့အပွုအမူတခြို့ကိုစိတျလိုတာပါ။ စိတျကူးယဉျဆနျတဲ့အပွုအမူပေါ့။ သူက နဂါးတိုငျးပွညျကလာတယျ။ သူက မငျးသားလေးတဈပါး၊ မငျးသမီးလေးတဈပါး အစရှိသဖွငျ့ စိတျကူးယဉျပွီးပွုမူနထေိုငျတတျတဲ့သူတှကေို ချေါပါတယျ။ အင်ျဂလိပျလိုဆိုရငျတော့ "Eighth- Grader Syndrome" လို့ချေါပါတယျ)
နောကျပွီးယှနျးခြီမှာ လြှို့ဝှကျခကျြအကွီးကွီးတဈခုရှိပါသေးတယျ။ အဲ့ဒါကတော့...
"ယှနျးခြီ! ဒီမှာကွညျ့ ဒီမှာကွညျ့ ဒီကောငျမလေးက မလှပါဘူး ဟုတျတယျမလား..."
အတနျးအရှဆေုံ့းတနျးမှာထိုငျတဲ့သူအမြားစုက မိနျးကလေးတှပေါပဲ။ ယောကျြားလေးတှဆေိုရငျတော့ သူ့လို စာဂပြိုးလေးတှပေဲရှိတာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ မိနျးကလေးတှကေ ယှနျးခြီကိုခငျကွတယျ။ သူတို့ပွောကွတာတော့ ယှနျးခြီက သူတို့လိုပဲ အေးအေးလေးမို့လို့တဲ့။ ယှနျးခြီလညျး ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီးဘယျလိုပွောရမှနျးကို နားမလညျပါဘူး။ သူကယောကျြားလေး ဒါပမေဲ့ ယောကျြားလေးတဈယောကျလိုလညျး မဟုတျဘူး။ သူ့အဆဈအပေါကျက မိနျးကလေးတှနေဲ့တူတယျလို့တောငျ ပွောလို့ရသေးတယျ။
"ကွညျ့ကွညျ့ပါဦး သူတို့ကသာ အတငျးရူးသှပျနတော မိတျကပျတှနေဲ့ဟာကို..."
ယှနျးခြီကို အတငျးလာတုတျတဲ့ကောငျမလေးက ကုတျထောကျဆံပငျလေးကို နားကွားထဲသှငျးပွီး ဆိုးဆေးကူထားတဲ့ နှုတျခမျးရဲရဲလေးကို စူပွီးပွောလာလရေဲ့။ ယှနျးခြီတဈခကျြမကျြခုံးပငျ့တယျ။ ကိုယျတိုငျက မိတျကပျတှနေဲ့ဟာကိုတခွားသူတဈယောကျ မိတျကပျလိမျးထားတာကို အပွဈပွောလို့ရရိုးလား။
"အငျးလေ... သူရယျတာကိုလညျး ကွညျ့ပါဦး ဟနျဆောငျရယျနတောအသိသာကွီးကို..."
နောကျတဈယောကျကပါ မကမြေလညျနဲ့လိုကျပွောလာတယျ။ ယောကျြားထုကွီးက သညျးသညျးလှုပျတဲ့မိနျးကလေးတှကေို မိနျးကလေးအခငျြးခငျြးက ဘယျတော့မှမကွညျကွဘူး။ အဲကွညျပွီဆိုရငျလညျး ဒါက တကယျကွိုကျလို့ (ဖွဈနိုငျတာ အမြားစုကတော့ အလှလေးတှမွေငျတာနဲ့ ဂေးတတျတဲ့မိနျးကလေးတှေ)၊ ဒါမှမဟုတျ သကျသကျ ယောကျြားထုကွီးရဲ့ အတနျးရှငျး(attention) ကိုလိုခငျြတာကွောငျ့ပဲ။ အခုဒီမိနျးကလေးတှကေ စဈလှနျးတဲ့မိနျးကလေးတှလေို့တောငျ ပွောလို့ရမယျ။ သူတို့တှကေ အတနျးထဲက ယောကျြားလေးတှေ သညျးသညျးလှုပျတဲ့ ဓာတျပုံထဲက မိနျးကလေးကို ကွညျကွပုံမရဘူး။
"နငျ့ crush ကောငျက သူ့ကိုသဘောကနြလေို့ နငျမကမြေနပျဖွဈနတောမဟုတျလား..."
တဈယောကျတဈပေါကျ စနောကျနကွေတဲ့ မိနျးကလေးတှကွေားမှာ ယှနျးခြီညပျသလိုလိုဖွဈလာတယျ။ ဘာလို့ မိနျးကလေးတှကေ သူ့ရှမှေ့ာဆိုရငျ နညျးနညျးလေးမှ အပွောအဆိုမဆငျခွငျရတာလဲ။ ညီအဈမတှလေိုပေါငျးတယျဆိုတာမြိုးကို သူ လကျခံမပေးခငျြပါဘူး။
ယှနျးခြီရဲ့အဖွစေကားကိုမရတာကွောငျ့ ပထမဆုံးမေးလာတဲ့ ကောငျမလေးက စိတျမရှညျခငျြတော့စှာနဲ့ ထပျပွီးမေးပွနျတယျ။ ယှနျးခြီကတော့ ခပျဖြော့ဖြော့ပဲပွုံးတယျ။ သူ ဘာပွနျဖွရေမှာလဲ။ ဓာတျပုံထဲက ခှေးလေးက ပှနျးခြိဖွဈပွီး ဆံပငျအညိုကောကျကောကျလေးနဲ့မိနျးကလေးက သူပါလို့။ ယှနျး ဆိုတဲ့ ID နဲ့ Photo Model ကောငျမလေးက သူဖွဈနတောကွောငျ့ ဒီကောငျမလေးကို လှလားမလှလားကို သူ ဘယျလိုလုပျပွီး ဖွရေမှာလဲ။ ကိုယျ့ကိုယျကို လှတယျဖွရေငျ သူက ကိုယျရညျသှေးတဲ့သူတဈယောကျဖွဈသှားမှာပေါ့။
ဒါပမေဲ့လညျး အမှနျအတိုငျးပွောရရငျတော့ ယှနျး က လှတယျ။ အာ... ယှနျးခြီမကျြနှာရဲခငျြသလိုလိုဖွဈသှားတယျ။ ဒုက်ခ သူတော့ ကိုယျ့ကိုယျကို လှတယျထငျနတေဲ့သူဖွဈတော့မှာပဲ။
ဟုတျတယျ သူ့ရဲ့လြှို့ဝှကျခကျြကတော့ ယှနျးခြီဆိုတဲ့ကောငျလေးသူက အခုအရမျးကို ကောငျလေးတှကွေားရပေနျးစားနတေဲ့ Photo Model ကောငျမလေး ယှနျး ဆိုတာပါပဲ။
ယှနျးခြီ ခပျတိုးတိုးလေးပဲပွနျဖွလေိုကျတယျ။ သူ မမေးမခငျြး မရှခြေောတှကေ သူ့ကိုအလှတျပေးမဲ့ပုံမပျေါဘူးလေ။ ဒီတော့ သူ စကားနညျးရနျစဲပဲဖွလေိုကျရတော့တာပေါ့။
"ယှနျးခြီက ဒီကောငျမလေးကို မကွိုကျဘူးလား..."
ယှနျးခြီခေါငျးလေးယမျးတယျ။ သူ့ကိုယျသူ ဘယျလိုလုပျပွီး သူ ကွိုကျလို့ရမှာလဲ။ သူက ဂရိနတျဘုရားဒဏ်ဍာရီပုံပွငျတှထေဲက ကိုယျ့ပုံရိပျကိုယျရအေိုငျထဲကွညျ့ပွီး ခဈြကြှမျးဝငျသှားတဲ့ Narcissus မဟုတျဘူးလေ။ ဒါကွောငျ့ သူ ခေါငျးလေးပဲယမျးမယျ။ ဒါက အကောငျးဆုံးအဖွပေဲ။
မိနျးကလေးတှကေ ယောကျြားလေးဖွဈတဲ့ယှနျးခြီက ယှနျး ကိုမကွိုကျတာကို တှတေ့ော့ သူတို့ရဲ့စိတျထဲက အစိုငျအခဲပွသှေားပွီး တခွား ရောကျတတျရာရာပေါကျတတျရာရာလြှောကျပွောကွတယျ။ မိနျးကလေးတှကေ အရမျးတျောတဲ့ သတငျးထောကျတှလေို့ ယှနျးခြီထငျတယျ။ ဘာလို့ဆို သူတို့ပွောနတေဲ့အကွောငျးအရာတှထေဲမှာ ကြောငျးအုပျက ထိပျပွောငျနလေို့ ဆံပငျတုကွီးတပျထားတဲ့အကွောငျး။ ဆရာမအပြိုကွီးက သူ့ထကျခုနဈနှဈလောကျငယျတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျနဲ့ တှဲနတေဲ့အကွောငျး။ မငျးသားတဈယောကျက အရငျတုနျးက စပှနျဆာရှိဖူးတဲ့အကွောငျး။ BL ရုပျရှငျကားတှကေ ဘယျလိုခတျေထ လာတဲ့အကွောငျး။ သူတို့ရဲ့လောကထဲ တာဇံတှမြေားလာလို့ စိတျညဈတဲ့အကွောငျး။ စုံစိနတောပါပဲ။
ယှနျးခြီက ဒီအကွောငျးတှေ သိပျမသိပမေဲ့ အတနျးထဲက ကောငျမလေးတှကြေေးဇူးနဲ့ သူ ကောငျးကောငျးသိနရေတယျ။ ရှဆေုံ့းတနျးထိုငျလို့ ဒီမိနျးကလေးတှဟော စာကိုပဲ စိတျဝငျစားတယျလို့ ထငျတယျဆိုရငျတော့ ကောငျလေးတှကေ အမှားကွီးမှားတာပါပဲ။ သူတို့က အလယျတနျးနဲ့နောကျတနျးမှာထိုငျတဲ့ ကောငျမလေးတှရေဲ့ ဗဟုသုတထကျမပိုရငျ မလြော့ပါဘူး။
"ဒါနဲ့ ယှနျးခြီ သိပွီးပွီလား နှဈလညျကရြငျ ငါတို့ Assignment တငျရမယျ..."
သူတို့ရဲ့ထှရောလေးပါး အတငျးပေါငျးစုံပွီးတော့ စာအကွောငျးကို ပွနျသတိရသှားပုံရတယျ။
"ငါးယောကျတဈဖှဲ့ခှဲတာ... နငျ ဘယျသူနဲ့ကလြဲ ငါပွောပွရမလား..."
အတနျးရဲ့ EC ကောငျမလေးက သူ့မကျြမှနျလေးပငျ့ပငျ့ပွီးပွောတယျ။ တခွားမိနျးကလေးတှရေဲ့ သူ့ကိုသနားလိုကျတာ ဆိုတဲ့အကွညျ့တှကွေောငျ့ ယှနျးခြီစိတျထဲ ထိတျသှားတယျ။ သူက စုပေါငျးလုပျရတဲ့ကိစ်စတှမှော ဘယျတော့မှ ကံမကောငျးတတျဘူးလေ။
"ဘာလို့ ငါ အဖှဲ့ခှဲပွီးတာကို မသိလိုကျရတာလဲ..."
"ဟငျ နငျ အဲ့ဒီကွကျဖလေးကို လှညျ့ကွညျ့လိုကျတာက သိနလေို့ မဟုတျဘူးလား! ကွညောတဲ့နကေ့ နငျကြောငျးမတကျဘူး... ဒါပမေဲ့ ငါက နငျသိပွီးပွီပဲ ထငျနတော..."
EC လေးရဲ့ အထိတျတလနျ့ပွောသံကွောငျ့ ယှနျးခြီခေါငျးကိုကျသလိုလို ခံစားလိုကျရတယျ။ ကွကျဖလေးဆိုတာက ခနျ့ဝသေျောကို မိနျးကလေးတှခေျေါတဲ့နာမညျပွောငျပါ။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ ထောငျထားတဲ့ဆံပငျနီနီတှကေို အမောကျလို့ သူတို့က ချေါပွီး ခနျ့ဝသေျောကို ကွကျဖလေးလို့ ချေါကွတယျ။ ယှနျးခြီကတော့ ခနျ့ဝသေျောကို ကွကျမောကျသီးနဲ့ပိုတူတယျလို့ ထငျတာပဲ။ ကွကျဖတဈကောငျထကျစာရငျ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးခြီအတှကျ ကွကျမောကျသီးနဲ့ ပိုတူတယျ။
ယှနျးခြီ စိတျညဈညဈနဲ့ပွောတယျ။ မေးသာမေးနရေတယျ... သူ့ရဲ့ကံဆိုးမှုကိုလုံးဝယုံကွညျထားတာကွောငျ့ သူ ကြိနျးသပေေါကျဒီကွကျမောကျသီးကောငျနဲ့ တဈဖှဲ့တညျးကမြှာပါပဲ။ နောကျပွီး EC ရဲ့စကားအရဆိုရငျ အဖွကေ ၉၉ ရာခိုငျနှုနျးသခြောတယျ။ ကနျြတဲ့ ၁ ရာခိုငျနှုနျးကိုတော့ သူ တမငျအတငျးကွီးကို မကနြိုငျပါဘူးလို့တှေးထားတာ။ နောကျပွီး သူ ကွကျမောကျသီးကောငျကို လှညျ့ကွညျ့တာက လူမှုကှနျယကျမှာ ပုံအမှနျကွီးနဲ့ သူ့ပုံကို အတငျးတှေ love react လုပျတာကို သိနလေို့ပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ မသကျမသာလှညျ့ကွညျ့တာ။ ကိုယျ့အတနျးဖျောက ကိုယျဆိုတာမသိဘဲ အရမျးတှေ သဘောကနြတောကို ခံရတော့ ယှနျးခြီစိတျထဲ အပွဈရှိသလိုလိုခံစားရတယျလေ။ တခွားသူတှကေိုတော့ ယှနျးခြီမမှတျမိပမေဲ့ ခနျ့ဝသေျောကိုတော့ ယှနျးခြီမှတျမိတယျ။ ဒါကလညျး လူဆိုးမကျြနှာပေးနဲ့ လကျနှဈခြောငျးကို အောကျစိုကျထောငျပွထားတဲ့ chuuninbyou pose နဲ့ profile picture ကွောငျ့ဆိုလညျး မမှားပါဘူး။
"ကတြယျလေ... နငျရယျသူရယျ စာမလုပျတဲ့အမွှာနှဈကောငျရယျ တဈခြိနျလုံးအတနျးမတကျတဲ့တဈကောငျရယျ..."
EC ပွောသမြှသူတှကေ သူတို့အတနျးမှာအော့ကွောလနျတှဖွေဈတာကွောငျ့ နာမညျတှမေပွောရုံနဲ့တငျ ယှနျးခြီသိလိုကျရတယျ။ သပေါပွီ Assignment က သူတဈယောကျတညျး လုပျရတော့မှာပေါ့။
"Assignment အမှတျက စာမေးပှဲမှာ တျောတျောပါမှာမို့ ဆရာတှကေ သူတို့ကို နငျနဲ့တှဲပေးတာထငျတယျ..."
Roll2ကောငျမလေးက ဖေးဖေးမမလေးယှနျးခြီကိုထပျပွောတယျ။
ကုသိုလျက သူပဲရပါလား! ဘာလို့ သူမှလဲ။ ယှနျးခြီစိတျထဲမှာ အမုနျးကွီးနဲ့ရရှေတျနပေမေဲ့လညျး သူ တိတျတိတျလေးနပွေီး မခြိပွုံးပဲပွုံးနလေိုကျတယျ။ ဘာလို့သူက ကံဆိုးပွီး Assignment ကို တဈယောကျတညျး လုပျရမှာလဲ။ ဒီကောငျတှကေ နညျးနညျးလေးမှ အားကိုးရမဲ့ကောငျတှမေဟုတျဘူး။
ငါတော့ ဘုရားကို ညတငျမကဘူး မနကျပါရှိခိုးသငျ့နပွေီ... ယှနျးခြီ စိတျညဈညဈနဲ့တှေးတယျ။ သူ နတေို့ငျးဘုရားရှိခိုးနတောတောငျမှ ကံက ဘာလို့မကောငျးရတာလဲ။ သူ့ရဲ့ group မှာ စာမလုပျတဲ့သောကျပငျြးအမွှာညီနောငျရယျ၊ ကိုယျပြောကျကြောငျးသားတဈယောကျရယျ၊ နောကျဆုံး ကြောငျးအုပျရဲ့လူရမျးကား တူလေးရယျ။ သွျော... သူက Assignment လုပျတာအပွငျ... သူတို့ကို ထိနျးပါထိနျးရတော့မယျထငျပါရဲ့။
ယှနျးခြီအတေျာ့ကို စိတျမသကျမသာဖွဈသှားတယျ။ အတနျးဝငျပွီးကတညျးက ဌာနမှူးချေါလို့ဆိုပွီး ပွနျထှကျသှားရတဲ့ ဆရာလညျး အတနျးခြိနျတဈဝကျလောကျမှ ပွနျရောကျလာတော့တယျ။ သငျခနျးစာတဈခုတောငျ မပွီးခငျမှာပဲ အတနျးခြိနျက ကုနျသှားခဲ့တယျ။ အတနျးခြိနျကုနျတာနဲ့ ကနျတငျးထှကျမယျဆိုတဲ့ ကြောငျးသားတှရေဲ့ စိတျကူးတှဟောလညျး ဆရာ့ရဲ့အခြိနျခိုးမှုနဲ့ နောကျဆရာမ ရောကျလာမှုအကွားမှာ ပြောကျသှားရတော့တာပေါ့။
ဘာကွောငျ့ တခွားသူတှရေဲ့ကြောငျးက လှတျလပျပွီး သူတို့ကြောငျးက ထောငျကွီးနဲ့တူနရေတာလဲ။ စိတျမကွညျလငျတော့တာကွောငျ့ ယှနျးခြီတဈယောကျ အကုနျလုံးကို မကောငျးမွငျခငျြလာတော့တယျ။ သူတို့ဆရာမတှကေလညျး ဘာလို့ အရမျးတှကေို စာသငျခငျြနရေတာလဲ။
"Paper2က သနျဘကျခါ Practical ရှိတယျနျော..."
အတနျးထဲဝငျလာတာနဲ့ ဆရာမက သူ့ဘာသာရပျက ဘယျတော့စာမေးပှဲရှိတယျဆိုတာကို အရငျဆျောသွတယျ။ အခုဆရာမကို ယှနျးခြီသဘောမကတြာက အဲ့ဒီအခကျြပဲ။ ဆရာမက အားနေ စာမေးပှဲက ဘယျတော့ဆိုတာကို အရမျးပွောတယျ။ နောကျထပျခွောကျလလောကျမှဖွရေမဲ့ နှဈဝကျစာမေးပှဲကိုလညျး နှဈစကတညျးက သတိပေးတယျ။ ဒါက ဘယျမှာကောငျးလို့လဲ။ စာမေးပှဲဆိုတာက စိတျခမျြးသာစရာကောငျးတဲ့ နာမညျမဟုတျပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့သူတို့ နလေ့ညျစာစားတဲ့အခြိနျရောကျလာတဲ့။ ကောငျလေးတှကေ ထုံးစံအတိုငျး လှတျကြှတျပွီဟဆေို့ပွီး ပွေးထှကျသှားကွတယျ။ မိနျးကလေးတှကေတော့ နညျးနညျးလေးအလှပွငျပွီးမှ ထှကျလာတာပေါ့။ ယှနျးခြီကတော့ ကြောငျးရဲ့ တိတျဆိတျတဲ့ အပငျတှအေောကျမှာ အိမျကနသေူကိုယျတိုငျပွငျလာတဲ့ ထမငျးဘူးလေးကို ထုတျလာလိုကျတယျ။
ယှနျးခြီရဲ့မိဘတှကေ သူနဲ့အတူတူနပေမေဲ့ မိသားစုမကျြနှာခငျြးဆိုငျတဲ့အခြိနျက ပိတျရကျတှမှောလောကျပဲရှိတယျ။ ယှနျးခြီရဲ့ မိဘတှကေ အစိုးရဝနျထမျးတှဖွေဈတဲ့အပွငျ ရာထူးကွီးတဲ့သူတှဖွေဈတာကွောငျ့ သူတို့ရဲ့အိမျပွနျခြိနျတှငျက အရမျးကို နောကျကကြွတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ သူတို့ပွနျရောကျရငျ ယှနျးခြီက အိပျနပွေီ။ အဲ့လိုမဟုတျဘူးဆိုရငျလညျး ယှနျးခြီက အခနျးထဲကနေ ထှကျမလာဖွဈပါဘူး။ ဘာလို့ဆို သူ စာလုပျနတောမြားတယျလေ။ သူဧညျ့ခနျးထဲထှကျလာတဲ့အခြိနျကပြွနျတော့လညျး သူ့မိဘတှကေ ကိုယျ့အခနျးကိုယျရောကျနကွေပွီလေ။
ဒီတော့ ပွောရမယျဆိုရငျတော့ ယှနျးခြီတို့ မိသားစုက ဘာပွဿနာမှမရှိဘဲ ခပျစိမျးစိမျးဖွဈနကွေတဲ့ မိသားစုလေးဖွဈနတောပေါ့။ ယှနျးခြီက လိမ်မာတဲ့သားလေးတဈယောကျလို့ ပွောရမယျ။ မိဘတှကေ အမွဲတမျး နောကျကမြှ ပွနျလာတာကွောငျ့ သူတို့ကစောစာမထနိုငျကွဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဟငျးခကျြတတျကတညျးက ယှနျးခြီက မိခငျကို မီးဖိုခြောငျတာဝနျကို ယူပေးခဲ့တယျ။ ဘာလို့ဆို သူ့အမလေညျး ပငျပနျးတယျ။ ပွီးတော့ ယှနျးခြီကို သိပျဂရုမစိုကျနိုငျတဲ့ မိဘနှဈပါးလုံးကိုလညျး ယှနျးခြီအပွဈမမွငျပါဘူး။ သူတို့ငှရှောတယျဆိုတာလညျး သူ့အတှကျပဲမဟုတျလား။
အိမျမှာနညျးနညျးလေးအထီးကနျြတာကွောငျ့ ယှနျးခြီသူ့ညီမဝမျးကှဲလေး ဟနျနာကို ချေါပွီးအဖျောလုပျဖွဈတယျ။ ဟနျနာက အခြုပျအလုပျဝါသနာပါတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျပေါ့။ ငယျငယျလေးနဲ့ သူမက ဒီဇိုငျးလှလှလေးတှကေို ခြုပျနိုငျတယျ။ ဒါတောငျသူမက အသကျပွညျ့တဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျမဟုတျသေးပါဘူး။ ပွောရရငျ ပါရမီရှငျလေးပေါ့။ ယှနျးခြီက ယှနျးဆိုတဲ့ Photo Model လေးဖွဈလာတာက ဟနျနာကွောငျ့လို့ ရာနှုနျးပွညျ့နီးပါးဆိုလို့ရတယျ။ ယှနျးခြီက ဓာတျပုံရိုကျရတာ ဝါသနာပါတယျ။ ဟနျနာက အဝတျလှလှလေးတှခြေုပျရတာ ကွိုကျတယျ။ နှဈယောကျတှတေဲ့အခြိနျမှာ နဂိုအဆဈအပေါကျသေးသှယျတဲ့ ယှနျးခြီတဈယောကျ မိနျးကလေးလို ဝတျတာလှမှနျးလညျးသိရော ဟနျနာတဈယောကျ ခှငျဖနျတော့တာပေါ့။ ယှနျးခြီကိုယျတိုငျကလညျး သူ့ကိုယျသူ လှလှလေးမွငျရတာသဘောကတြာကွောငျ့ ဟနျနာ့ရဲ့ ဂါဝနျလှလှလေးတှကေို ဝတျပေးဖို့တဈခါလေးတောငျ မညညျးညူခဲ့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ခွောကျလကြျောမှာတော့ ယှနျးဆိုတဲ့ Photo Model လေးဟာ ယောကျြားလေးတှကွေား ရပေနျးစားလာတော့တာပေါ့။ ဒါက ယှနျးခြီရဲ့ Photo Model ဖွဈလာတဲ့ သမိုငျးကွောငျးလေးပါပဲ။ ယှနျးခြီက သူ့ကိုယျသူ ယောကျြားလေးတှကေို သဘောကလြား မိနျးကလေးတှကေို သဘောကလြားဆိုတာတော့ မစဉျးစားမိဘူး။ ဘာကွောငျ့ဆို သူ လူကွောကျတယျ။ လူအကုနျလုံးကိုကွောကျတာ။ သူနဲ့မရငျးနှီးတဲ့သူ မှနျသမြှကို သူ ညီညီမြှမြှကိုကွောကျတယျ။ ယောကျြားလေးသျော မိနျးကလေးသျော သူ မခှဲပါဘူး။ သူ အကုနျလုံးကို ကွောကျပါတယျ။
"ဟယျ ယှနျးခြီ... ကွကျဖလေးက နငျ့ကိုကွညျ့နတေယျ..."
ယှနျးခြီ ထမငျးဘူးလေးယူနရေငျးကနေ ပွတငျးအပွငျက သူ့ကိုကွညျ့နတေဲ့ ခနျ့ဝသေျောနဲ့ အကွညျ့ခငျြးဆုံသှားခဲ့တယျ။ အဲ သူ့ဆံပငျတှကေမကျြလုံးကို ဖုံးနတောကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျောက သူတို့နှဈယောကျ အကွညျ့ခငျြးဆုံသှားတယျဆိုတာကိုတောငျ သိပါ့မလား ယှနျးခြီမသိပါဘူး။ ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကို တခဏပဲ စိုကျကွညျ့ပွီးတော့ သူ့လူရမျးကားလေးတှရေဲ့ နောကျပွောငျဆှဲချေါမှုနောကျက ပါသှားလရေဲ့။
ပွောငျစပျစပျပွောလာတဲ့ သူနဲ့အတူထိုငျတဲ့သူတှကေို ယှနျးခြီစိတျထဲကနပေဲ မကျြစောငျးထိုးလိုကျတော့တယျ။ သူ့ကိုယျသူလညျး Assignment အတှကျ ကံကောငျးပါစလေို့ပဲ ကွိတျဆုတောငျးရတော့တာပေါ့။
Back to Book Previous Next
KimYooHyun 24.11.2019, 10:03 4.9
MaskMelon 24.11.2019, 02:03 5
RaiseRen 23.11.2019, 14:29 5
Yoon ka chit sayr lyyyyy ❤❤❤
Chue (MiKhoon) 23.11.2019, 13:39 5
တပှိုငျ့က ကတျသတျပီးကနျြခဲ့တာ မသိလို့ပါလို့🥺🥺🥺
Chue (MiKhoon) 23.11.2019, 12:34 4.9
Nyo Lae 23.11.2019, 10:41 5
ယွန်းလေးက ချစ်စရာလေး 😍
Khant D 23.11.2019, 10:27 5
လူကြောက်တဲ့ ယွန်းချီလေးက ချစ်စရာလေး <3